Qiimaynta Ciyaartoyda Kooxaha Barcelona & Juventus Ee Kulankii Ay Balaugrana Ugu Soo Gudbtay Wareega 16-ka Kooxood Ee Champions Leaque-Kumaa Ahaa Xidigii Garoonka Ugu Fiicnaa? – WWW.Gool24.net
Barcelona ayaa Juventus ka soo heshay wixii ay uga baahnayd oo ahaa in babraro ay soo gasho si ay u xaqiijisato booskeeda wareega 16 ka kooxood ee Champions Leaque. Valverde ayaa qaatay go’aan lama filaan ah kadib markii uu kaydka ku nasiyay Lionel Messi isaga oo ka fikirayay kulanka adag ee Valencia ay booqan doonaan. Laakiin Messi oo qaybtii danbe ee kulankii Turin kaydka ka soo baxay ayaa dhiiro galin wayn u noqday xidigaha kooxdiisa si ay natiijadii ay doonayeen uga helaan kulankii Old Lady.
Laakiin Juventus oo kulankan uga baahnayd in ay guulaysato si ay ugu soo baxdo wareega 16 ka kooxood ee UCL ayayna u suurtogalin laakiin waxay sugi doontaa ilaa maalinta ugu danbaysa heerka Groupyada Champions Leaque markaas oo la ciyaari doono kulamada lixaad.
Haddaba waxaanu halkan idiinku haynaa qiimayntii ciyaartoyda kooxaha Barcelona iyo Juventus ee kulankii aadkaa ee ay labada kooxood dhibcaha ku qaybsadeen. Waxaa jiray ciyaartoy badan oo bandhig fiican sameeyay balse waxa labada kooxoodba ku adkaatay in ay wax goolal ah dhaliyaan.
XIDIGII GAROONKA: Medhi Benatia ayaa noqday xidigii garoonka ugu fiicnaa kadib markii uu sameeyay bandhig aad u fiican kaas oo kooxdiisa ka caawiyay in ay iska joojisay halistii weerarka Barcelona. Medhi Benatia ayaa sameeyay boqolkiiba 96.9% kubbad dhiibis guulaysatay, waxa uu dhexda ka qabtay 8 kubbadood oo ay Barcelona fursad ku abuuraysay halka 10 jeer uu kooxdiisa Old Lady ka saaray halis goolkeeda ku soo wajahnayd.
Guud ahaan ma jiro hal ciyaartoy oo labada kooxood ka tirsan oo kulankan ku fashilmay waana sababta uu u ahaa kulan adag oo aan wax qaladaad badan la samayn laakiin waxaa marka xidiga garoonka laga yimaado kulankan ugu fiicnaa Andres Iniesta iyo Ivan Rakitic halka bandhiga ciyaartoyda kale uu ahaa mid meel dhexaad ah.
QIIMAYNTA CIYAARTOYDA JUVENTUS
Juventus: Buffon (6), Sandro (6), Barzagli (7), Rugani (7), Benatia (8), Cuadrado (7), Pjanić (6), Khedira (6), Costa (7), Higuaín (6), Dybala (7)
Badalkii: Bentacur (6), Marchisio (6), Matuidi (6)
Badal Aan La Isticmaalin: Szczesny, De Sciglio, Mandzukic, Asamoah
QIIMAYNTA CIYAARTOYDA BARCELONA
Barcelona: Ter Stegen (7), Semedo (7), Pique (7), Rakitic (8), Busquets (7), Iniesta (8), Suarez (6), Paulinho (6), Deulofeu (6), Digne (7), Umtiti (7)
Badalkii: Lionel Messi (7), Alba (6)
Badal Aan La Isticmaalin: Cillessen, D Suarez, Alcacer, Aleix Vidal, Vermaelen